Automation zokukhiqiza yesimanje.
Automating komsebenzi - yilokhu ivame kunoma iyiphi inhlangano yesimanje. Zisetshenziswa emikhakheni ehlukahlukene umsebenzi ibhizinisi. Ngokwesibonelo, izinhlelo CAD optitex Thenga - kusho ukuthenga ithuluzi esiphelele automating nomsebenzi emahhovisi design. Nokho, uzothola iningi uhlelo for ezishintshayo yephrojusa edumile emhlabeni wonke software "1c". Ububanzi amakhambi e-software "1c" libanzi ukuze manje akekho bamangale, ababone e nemibuzo yosesho lwe-inthanethi injini ezifana "imithi 1s esibhedlela isethulo" noma "1s yobisi thwebula". Imikhiqizo isofthiwe "1c" unendlela yawo amakhambi e-software cishe yonke imikhakha yempilo yomuntu sesimanjemanje, njenge:
- imfundo, njll
Ukusebenzisa imikhiqizo "1c" yokuhweba lanamuhla.
imikhiqizo "1c" yenkampani, njengoba kushiwo ngenhla, sisetshenziswa kabanzi ukudayisa. Nokho, le nkampani iye wadala izinhlelo eziningana elakhelwe ukulibona kwezentengiselwano, ezivame kakhulu sazo 1c Uhlelo: yezokuhwebelana kanye ishede.
Lolu hlelo kuhloswe ngalo ukuba isetshenziswe kwezebhizinisi ezihlukahlukene nosayizi. Ngosizo ke ongayenza zonke izinqubo umsebenzi kunoma iyiphi inhlangano zohwebo ngokuzenzakalela kakhulu futhi kahle. okufushane Ngisho 1c eziyisisekelo hlelo has uchungechunge imisebenzi elikuvumela ukuba ngaphezulu ngempumelelo ukufeza eziningi yokukhiqiza imisebenzi, lapho amadokhumende alandelayo shall 1c:
- accounting imibhalo olawula lezimpahla izinqolobane ibhizinisi;
- izincwadi eziphathelene ukuthengwa nokudayiswa kwezimpahla;
- Amarekhodi ezimali, ukulawula izimpahla ezingokoqobo futhi zigcine ibhizinisi.
Ngaphezu kwalokho, 1c isixazululo software: yezokuhwebelana kanye ishede kusiza ezishintshayo commercial ibhizinisi ubudlelwano bayo ikhasimende base kanye nabaphakeli.
Ngalolu hlelo kungenzeka kuzo zonke izigaba zokuphila ibhizinisi ukwenza izinqubo zayo ibhizinisi ngokuzenzakalela kakhulu futhi kahle. Lolu hlelo ikuvumela ukuba:
- ukuqhuba zezimali kanye ezimali ukuphathwa ehlukile komunye nomunye;
- Gcina amarekhodi ngesikhathi esifanayo egameni eziningana izinhlangano ezingokomthetho;
- ukubhala ukudayiswa kanye ukuthengwa kwemikhiqizo;
- ukwenza control yokusungula, ihlukaniswe amaqembu. It uhlala kungenzeka ukhethe noma iyiphi indlela yokuqopha izindleko amasheya;
- ukugcina amarekhodi aphathelene izimpahla ukuthi zidluliselwe ukuqaliswa izimpahla eziye ibuyisiwe, njll;.
- ukwenza akhawunti ye impahla engokoqobo labetibambile ngokheshi noma ngenxa yebhizinisi;
- ukuqapha ukutholakala credit yezimpahla kanye nokugcina amarekhodi buyiselo kwabo ngesikhathi esifanele;
- bangahlangani kwamabhuku semphahla zabo ngidayisa amabhizinisi kanye walabo izimpahla okuyinto Benziwe eyisebenzisa;
- ukufeza ukubhuka imikhiqizo futhi ulawule inkokhelo yabo.
Through the 1c Uhlelo: yezokuhwebelana kanye ishede uzophinde nethuba:
- ngokuzimela ukwakha inqubomgomo amanani imikhakha ehlukahlukene imikhiqizo;
- ugcine amarekhodi ukukhiqizwa kunoma iyiphi amayunithi wokulinganisa;
- ugcine amarekhodi cash amafa nganoma yiluphi uhlobo lwemali oyifunayo;
- ukushintsha amanani imikhiqizo, njll
Thenga noma iyiphi isofthiwe zomkhiqizi "1c" unga ku-intanethi esitolo "1s Market" ngamanani akhokhelekayo.
Idolobha Udmurtia: Sarapul, Mozhga, Glazov. Incazelo emfushane
Amazambane franzuski nezinye izinhlobo zokudla okulula amazambane